के गर्दैछन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ?::Pathivara News
के गर्दैछन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ?
सूष्मा राई/ काठमाडौं नेपाल प्रहरीको नेतृत्व लिनेहरुमा जति होड चल्छ उति नै सेलिव्रटी शैलीमा काम गरेका उदारणहरु नभएका भनेपनि होईन् । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा नेतृत्ब समालेसंगैप्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनालको आज भोली न त मिडिया मै चर्चा छ न बजारमा नैअहिले त्यति चर्चारु उनी मिडिया प्रचारबाट अलि टाढा बसे जस्तो भान हुन्छ ।
खरो शैलीर साहसिक भूमिकाका कारण विगतमा धेरै चर्चामा आए सर्वेन्द्र आर्इजीपी । नेतृत्वमा आएसंगै उनले विगतलाई भन्दा अलि फरक शैलीमा अगाडि बढ्नमा प्रयासरत छन् । उनका योजना हल्ला कम, काम बढी गर्ने नयाँ रणनीतिमा लागि परिरहेका छन्।नतिजा देखिने गरी चुपचाप काम भर्खर मात्रै मातहतका कमान्डर तथा कर्मचारीलाई देश र जनताको सेवालाई ख्याल गरौं र अपराध र अपराधी प्रती बिबेक पुर्ण कठोरता अपनाउन निर्देशन दिइरहेका छन्।
यो हल्ला गर्ने वा चर्चा चलाउने बेला होइन, काम गरेर देखाउने समय हो । म त्यही मिसनमा छु । नतिजा देखिने गरी उनी चुपचाप काम गरिरहेका छन् । चर्चामा आइरहने खनाल आर्इजीपी भएपछि चर्चा चलाउन र प्रचार बढाउन भन्दा काम गर्न र संगठन सुदृण गर्नमा तल्लीन छन् ।
हाम्रो काम गरेपछि रिजल्ट नागरिकले तत्काल अनुभुती हुने गरी कानुन कार्यन्यन गर्ने देशलाई संमृद्धिको बाटोमा डोर्याउने कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने अहिलेको पहिलो काम हो । अब प्रहरी बलियो हुन्छमैले प्रहरी संगठनलाई बलियो र जनताको भरोसा योग्य बनाउन लागेको छु । विगतमा प्रहरीभित्र आन्तरिक गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक चलखेल जसरी हाबी भयो, त्यसले फिल्डका हरेक सिपाहीको मनोबल कमजोर बनाएको थियो र प्रहरीको छविसमेत धमिलिएको थियो । नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्डुलाई थप कसिलो बनाएर हरेक सिपाहीको मनोबललाई उच्च बनाउने र प्रहरीको छवि चम्काउने अभियानमा उनी लागेका छन्।
आर्इजीपी नियुक्ति विवाद, सरुवा तथा बढुवामा हुने चलखेल तथा दौडधुपका कारण प्रहरीमा विगतमा देखिएको बेथिति र अनुशासनहीनतालाई कडाइका साथ पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी समेत आफुमा रहेको उनी बताउछन् । हिजोका दिनहरुमा त्यस्ता केही गतिविधि भए होलान् तर अब प्रहरीमा त्यस्तो हुँदैन, संगठन चल्दैन पनि।
अब कुनै हालतमा कसैले भन्दैमा नेताको घरमा दौडधुप र भनसुनले सरुवा बढुवा अब प्रहरीमा हुँदैन यो कुरा सबैले बुझ्दा हुन्छ । सबैको कामको मूल्यांकन सहि ढंगले र प्रक्रियागत रूपमा हुन्छ, अब सिस्टमकोविकास भईसकेको छ ।दक्षिण एसियाकै नमूना प्रहरीमेरो परिकल्पना यस्तो छ कि आन्तरिक सुशासन र सदाचारिताको विकास गरेर नेपाल प्रहरीलाई दक्षिण एसियाकै एउटा नमूना प्रहरी बनाउने लक्ष्यका साथ उनले मिसनका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं ।
सायद कहि बर्षभित्र यसको प्रतिफल देखिन्छ।यो मेरो अठोट हो, म नेपाल प्रहरीलाई दक्षिण एसियामा नमूना प्रहरी बनाएर एक नम्बर बनाउन प्रयासरत छु । त्यो काम शुरु भइसकेको छ, प्रहरीले गर्नुपर्ने काममा चुस्तता आएको छ। अवरुद्ध भएका प्रशासनिक कामहरू सम्पन्न गरिएको छ। फिल्डमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा पनि विशेष पहल थालिएको छ। २० वर्षदेखि ब्लक भएको बढुवा तथा सरुवालाई खनालले दुई महिनामै सहज रूपमा सम्पन्न गरेका छन् । यसले जवानदेखि उच्च तहमा एक खालको उत्साह थपिएको छ ।
जवान देखि उच्चअधिकृतसम्मको समयबद्ध बढुवा र सरुवाले मनोबल बलियो हुने र व्यावसायिकता झन् बढ्ने विश्वास खनालको छ । उनी आर्इजीपी भएपछि जवानदेखि डीआर्इजीसम्म करिब २० हजारको सरुवा र पदस्थापन भएको छ । यस्तै, जवानदेखि एसएसपी सम्मको साढे दुई हजारको बढुवा सम्पन्न भएको छ । सरुवा९बढुवा र पदस्थापनमा जुन प्रकारको अलमल र ढिलाइ हुँदा अनेक खालका चलखेल हुने र त्यसले संगठनका सदस्यहरूलाई अन्योलमा पार्ने जुन अवस्था थियो, त्यो अब अन्त्य भएको छ।
आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि आपराधिक गिरोह र समूहविरुद्ध विशेष अप्रेसन चलाएका छन् । अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा हामीले शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार काम गरिरहेका छौं, त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ, खनाल भन्छन्, कुनै पनि आवरणमा हुनसक्ने गैरकानूनी कार्य, अपराधजन्य, हिंसात्मक घटना हुन नदिन विशेष सतर्कतासहित रणनीतिक रूपमा प्रहरी परिचालित भएको छ।वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी तथा बदमासीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सघाउने काम प्रहरीबाट भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वीकृति र सहमतिबिना मलेसियालगायत देशमा रोजगारीका लागि पठाउने क्रममा विभिन्न नाममा सिन्डिकेट खडा गरी असुल्ने र ठग्ने तीन दर्जनभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर ठगी मुद्दा चलाएकोछ ।यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने क्रममा प्रहरीले सरकारलाई अग्र पंक्तीमा रहेर सहयोग गरेको कुरा आम जनताले महसुस गरेको कुरा हो । यो काम सजिलो थिएन तर हामीले अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्‍यौं र सिन्डिकेट अन्त्य भयो । जसले सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन भए र प्रहरीको नेतृत्व साहसिक र बोल्ड भएमा कार्यान्वयन हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ् । विशेष अप्रेसन लागूऔषध विरुद्ध पनि विशेष अप्रेसन नै चलाइएको छ। यसमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार कारवाही अगाडि बढाइएको छ ।
धेरै गिरोह नियन्त्रणमा आइसकेको खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार मानव बेचविखन तथा बाल यौन दुराचारलगायत सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि पनि प्रहरीले आक्रामक अभियान चलाएको छ।खनाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानका लागि गहन गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्।त्यही सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको उनी बताउँछन् ।
भन्छन्, ती गोष्ठीमा संगठन सुधार, सुदृढीकरण, आन्तरिक सुशासनबारेमा पनि नयाँ सर्कुलर जारी गरिएको छ।राष्ट्रसंघीय मिसन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र सहभागिता बढाउन पहल भईसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरूको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी भएर उनले अन्य देशका प्रहरी प्रमुख तथा नगारिक सुरक्षा अधिकारीसँग भेटवार्ता समेत गर्ने अबसर मिल्यो ।
सुरक्षा वृत्तमा बेग्लै पहिचानआम प्रहरी अधिकृतभन्दा फरक शैली र स्वभावका सर्वेन्द्रको सुरक्षा वृत्तमा बेग्लै पहिचान छ। उनी संगठनभित्र जति लोकप्रिय छन्, बाहिर पनि उनको छवि राम्रो छ । बोल्ड व्यक्तित्व र दृढ आत्मविश्वास, व्यावसायिक शैलीका कारण उनी आम जनताको नजरमा आशा लाग्दो आई।जि।पी।मा गनिन्छन् ।
विगतमा धेरै अप्ठ्यारा अवस्थामा उनले निकै सुझबुझका साथ साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । संकटका घडीमा समाधानको सूत्र बनेर उनी फिल्डमा खटिएका छन् । २८ वर्ष लामो व्यावसायिक यात्रामा उनले थुप्रै महत्वपूर्ण मोर्चाको कमान्ड सम्हालेका छन् तर कुनै पनि अप्रेसन तथा मिसनमा उनी असफल भएका छैनन् । जोखिमसँग जुध्‍न र संकटलाई सामना गर्न उनलाई मन पर्छ किनकि त्यो साहस र धैर्यतापनि उनमा छ ।
संवेदनशील संक्रमणमा कुशल सुरक्षासंवेदनशील संक्रमणमा कुशल सुरक्षा समन्वयदेखि सडक आन्दोलनको व्यवस्थापनमा उनको विगतको भूमिका कहिल्यै विवादमा परेन। गुण्डाराजसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने सर्वेन्द्रले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले भन्दा पनि गुण्डालार्इ छाडेका थिएनन् र उनको गाडीसमेत खानतलासी गरेका थिए । राजाले गद्दी छाडेपछि नारायणहिटीको साँचो बुझ्ने महत्वपूर्ण काम पनि उनले सुझबुझका साथ पूरा गरेका थिए।
फुटबलमा हुने म्याच फिक्सिङको भन्डाफोर गरेर उनले खेलकूद जगतमा तरंग ल्याइदिएका थिए, त्यसपछि नेपाली फुटबलले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ भने बिद्युत चुहावट गरेर र उद्योग कलकारखाना संग मिलेर जनतालाई अन्धकारमा राख्न बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको कर्तुत पत्ता लगाई प्राधिकरणका सिईओ कुलमान घिसिङ्संग समन्वय गरी तत्कालै एक्सनमा गएका कारण अहिले नेपाली जनताले अध्यारोमा बस्न परेको छैन जसमा तत्कालीन अपराध महाशाखाका प्रमुख हालका आईजिपी सर्वेन्द्र खनालको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ भने उपभोक्तलाई पम्पमा डिभाईस जोडी कम पेट्रोल दिई कालोबजारी गर्ने ब्यबसायिलाई र त्यस्ता काममा सघाउने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई एक अपत्यारिलो कामको समेत उनले पर्दाफास गरी साहासिक काम गरेका थिए ।
यस्तो ब्यबसायिक, बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने, सिर्जनशिल ब्यक्तित्व भएका आईजिपी सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी संगठनलाई सुदृण सक्षम र जनताको भरोसा योग्य बनाउन सफल हुने छन् र जनताले शन्ती सुरक्षाको अनुभुती गर्ने छन र अपराध मुक्त समाजको स्थपना हुनेछ भने सरकारले बिकास र समृदी ल्याउन उनको नेतृत्वमा रहेको प्रहरीले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सकोस् !